Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo gaaray dalka Turkiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo gaaray dalka Turkiga
August 25, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha dowlada Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali. Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada Puntland.
Istanbul-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa gaaray dalka Turkia, sida ay ilo-wareed saraakiisha dowlada ah ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Madaxweyne Cabdiweli ayaa ka dagay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Istanbul kadib markii uu marti-qaad rasmiya ka helay dowlada Turkiga, sida ay sheegeen ilo-wareedka.
Madaxweynaha Puntland ayaa beryahaan booqasho ku joogay dalka Itoobiya.
Faahfaahin rasmi ah lagama hayo ujeedada safarka madaxweynaha ee dalka Turkiga.
Turkiga oo mashaariic badan ka fuliyay gudaha Soomaaliya, ayaan wax mashaariic ah ka hirgalin deegaanada Puntland, balanqaadyo hore oo Turkiga sheegay in mashaariic ay ka fulinyaan Puntland ayaan wali waxba ka hirgalin.
September 17, 2016 Madaxweynaha Cabdiweli oo kormeeray shaqooyinka wasaaradaha iyo haayadaha dowliga ah ee Puntland iyadoo musuq-maasuq balaaran jiro